नारायणहिटी प्रकरण : विद्यासुन्दरले बतासलाई दिए अनुमति, के गर्लान् मन्त्री आले ?::The Leader Of Nepal
नारायणहिटी प्रकरण : विद्यासुन्दरले बतासलाई दिए अनुमति, के गर्लान् मन्त्री आले ?
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र होडिङ बोर्ड पनि राख्न दिने भएको छ । महानगरपालिकाले दरबार संग्राहलय हातामा डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति दिएको हो । यसअघि दरबारकै अघिललो भागमा यति ग्रुपलाई पनि विज्ञापन बोर्ड राख्न महानगरपालिको अनुमति दिएको थियो ।
यसअघि नै महानगरपालिकाले गत साउन अगावै बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको थियो । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन सेटिङबाट ठेक्का हात पारेको कम्पनीलाई नै महानगरपालिकाले ठूलो आकारको होडिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको खुलेको हो ।
कानूनले यसरी स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ले सम्पदा क्षेत्र विरुप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
नारायणहिटीभित्र बतासले बनाएको संरचना संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा भत्काइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नै होडिङ बोर्ड राख्न दिने अनुमति दिएसँगै अब मन्त्री आलेले के गर्लान् ? भन्ने आम चासो रहँदै आएको छ ।
बतास समूहले नारायणहिटीभित्र संरचना बनाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहाद्र देउवासमेत विवादमा तानिएकी छिन् । तर उनले बतास समूहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । केही दिनदेखि बतास समूह र राजनीतिक दलका नेताबीचको कनेक्सनकोसमेत चर्चा भइरहेको छ ।
बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ज्वाईं र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मान्छे भएको बताउँदै आएका छन् ।
महानगरपालिकाले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्रै होर्ड राखेबापत वार्षिक २ लाख ४५ हजार विज्ञापन कर लिनेछ । नारायणहिटी परिसरमा अग्लो टावर बनाएर बोर्ड राख्न लागिएको हो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालीन प्रमुख प्रकासशीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले नारायणहिटीमा बोर्ड राख्ने अनुमति दिन दबाव दिएको थियो ।
होर्डिङ बोर्डका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकस समितिले नै पत्र काटेको महानगरको राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताए ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालीन प्रमुख प्रकासशीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले नारायणहिटीमा बोर्ड राख्ने अनुमति दिन दबाव दिएको स्रोतको दावी छ । यो बोर्ड नारायणहिटीको कुन भागमा राख्ने भन्नेमा महानगरपालिका आफैं स्पष्ट छैन । संग्राहलयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रवेशद्वारबाट पछाडि नारायणहिटी दरबारको मूल ‘प्यागोडा’ भवनको मुनिपट्टि पर्ने गरी अग्लो बोर्ड राख्ने तयारी छ ।